नानी वावु देखी तन्नरीलाई घाटीमा टन्सील भ‍‍एर हैरानी खेपी रहनु भएको छ भने अब यी उपाए अपनाउनुहोस !!! | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
नानी वावु देखी तन्नरीलाई घाटीमा टन्सील भ‍‍एर हैरानी खेपी रहनु भएको छ भने अब यी उपाए अपनाउनुहोस !!!
कहाँ हुन्छ टन्सीलाइटिस-
मुख ‘आँ’ गर्दा जिब्रोको फेदमा उपजिह्वा (किल्किले) को दुवै भागमा रहेको गाँठो रातो र सुन्निएको छ भने सम्झनुपर्छ व्याक्तिलाई टन्सीलाइटिस भएको छ । यदि दुवै भागको गाँठो सुन्निनु, दुख्नु र रातो भई पाक्नु र पिप जमेको अवस्थालाई अंग्रेजीमा टन्सीलाइटिस भनिन्छ ।
टन्सील हुने कारणहरुमा सामान्यतया, बिटा-हेमोलाइटिक-स्ट्रेपटोकोक्कस, स्टेफिलो कोक्कस आउरस, नामक बेक्टेरियाले गर्दा हुने गर्दछ भने अन्य पूर्ववर्ती कारक तत्वहरुमा मुखको दन्त स्वच्छतामा कमि हुनु, पोषणयुक्त भोजनको अभाव, धेरै भिडभाड भएको बस्ति वा ठाँउमा बस्नु, स्वच्छ हवाको आवागमन हुने (भेन्टिलेसन) भएको कोठा नहुनु आदी ।
टन्सीलाइटिसको प्रकार- टन्सीलाइटिस दुई प्रकारको हुन्छ ।
(१) एक्युट टन्सीलाईटीस- यसमा एकातर्फको टन्सील्स सुन्निएर आउँछ, पछि अर्को भागको टन्सील पनि सुन्निन्छ । यसको आकार सुपारीको दाना जत्रो हुनसक्छ । किल्किले पनि सुनिएर रातो हुन्छ । खाने नली पनि सुन्निएर अवरुद्ध हुनसक्छ, जसले गर्दा खाने–पिउने बेलामा पीडा हुन्छ । बोल्न गाह्रो हुन्छ । टन्सीलको दर्द कानसम्म फैलिन सक्छ र १०३–१०४ डिग्री सेल्सियससम्म ज्वरो पनि आउन सक्छ । पहिलो अवस्थामा यदि उपचारले रोगमा कमि आएन भने बिस्तारै टन्सील पाक्छ र फुट्न पनि सक्छ ।
(२) क्रोनिक टन्सीलाइटिस- जुन व्याक्तिलाई बारम्बार टन्सीलको समस्या भईरहन्छ भने पछि यही क्रोनिक (जिर्णरोग) को रुपमा परिणित हुन्छ । क्रोनिक अवस्थाको टन्सीलाईटिसमा श्वास लिन र छोड्नमा पनि कठिनाइ हुन्छ, मुखबाट साँस लिनुपर्ने हुन्छ र साथै व्याक्तिमा घुर्ने समस्या पनि शुरु हुनसक्छ । घाँटी खस-खस गरि खोकिलाग्नु, घाँटी को लिम्फग्ल्याण्ड सुन्निनु, टन्सीलको आकार सधैंको लागि सामान्यभन्दा ठुलो देखिन्छ ।
लक्षण- टन्सील सुन्निनु, खाना–पानी निल्न गाह्रो हुनु, भोक नलाग्नु, खाने कुराको स्वाद नहुनु, श्वास फेर्न अफ्ठ्यारो हुनु । स्वास गन्हाउनु, टाउको दुख्नु, कान दुख्नु, स्वरमा परिवर्तन आउनु वा स्वर भासिनु, ज्वरो आउनु र शरीर दुख्नु आदी ।
जटिलता- टन्सील पाक्नु, रिमयुटिक फिबर हुनु, किड्नी सुन्निनु आदि जस्ता कमप्लिकेशनहरु आउन सक्छ ।
उपचार- एलोप्याथिमा एन्टिबायोटिक दिईन्छ यसबाट भएन भने अपरेशन गर्ने सल्लाह सम्बन्धित चिकित्सकबाट दिइन्छ । होमियोप्याथिक औषधिको प्रयोगले टन्सीलाइटिस जरैबाट पूर्णरुपले निर्मुल हुनसक्छ । सर्जरीको आवश्यकता पर्दैन । अत: त्यस्ता रोगी जो अपरेशन नगराई औषधिबाट नै ठिक हुन चाहन्छन् वा सानै उमेरका बाल-बालिकाहरु, मधुमेहका रोगी अथवा हृदयरोगबाट पीडित रोगी जसलाई टन्सीलको समस्या छ भने एकपटक होमियोप्याथिक उपचार गराएर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
सल्लाह- टन्सीलको शुरुवातमा एकगिलास पानीमा एक चुटकी नुन हालेर गार्गिल गर्दा गलाको सुजनमा धरै लाभदायक हुन्छ ।
टन्सीलाईटिसमा ठोस खानेकुरा निल्न कष्ट हुन्छ त्यसर्थ पातलो झोलिय पदार्थ जस्तै– दुध, फलफुलको रस, बार्ली, साबुदाना, दलिया, शाकाहारी या मान्साहारी सुप खानु पर्छ । खानामा नुन नहालेको उमालेको सब्जीहरु खानाले टन्सील चाँडै आराम हुनमा सहयोग पुर्याुउँछ ।
डिहाईड्रेशन हुन नदिनको लागी प्रसस्तमात्रामा मन तातो पानी खाने । घामलाग्ने तथा शुद्ध हवा आउने कोठामा बस्नु पर्छ । ज्वरो को अवस्थामा आराम गर्ने । धुमपान न गर्ने । पिरो, अमिलो, गुलियो, बढि तेल र मसाला हालेको सब्जी , अमिलो, चिसो, दहि, महि को सेबन गर्नु हुदैन । गरम पर्दाथको सेवन गरेपछि लगते चिसो पेयपदार्थको सेवन कदापि गर्नु हुदैन । – इ खबरचौतारीबाट